I-Smart Blackboard, I-Interactive Whiteboard, Iphaneli ye-Interative Flat - EIBOARD
Ngohlobo lwe-EIBOARD, FC, FCJYBOARD kanye ne-OEM, sisebenza ngokukhethekile emikhiqizweni esebenzayo ehlakaniphile yezemfundo nebhizinisi, ukwenza isethulo sibe lula futhi sibe lula.
Umkhiqizi ophezulu kanye nomhlinzeki we-OEM wamabhodi wokuthinta ahlakaniphile nezibonisi.
Imikhiqizo yethu eyinhloko ihlanganisa ibhodi elihlakaniphile elirekhodikayo eliholelayo, isikrini sokuthinta esine-led , iphaneli eyisicaba yenkomfa, ibhodi elimhlophe elisebenzisanayo, i-multimedia yonke i-PC eyodwa, i-multimedia all-in-one whiteboard, i-interactive terminal, ikhamera yedokhumenti, i-laser projektha kanye nokuthinta okuhlakaniphile okuhlobene bonisa imikhiqizo.
Kusukela kumikhiqizo kuya kumasevisi ukunikeza amakhasimende umuzwa wekhwalithi ongenasici
Ithimba le-R&D eliqinile nelinolwazi lisebenzela ukuthuthukisa imikhiqizo emisha nokuthuthukiswa okubalulekile ngaso sonke isikhathi, i-OEM ne-ODM yamukelwe.
Ngendawo yokukhiqiza engaphezu kuka-10000 m2 kanye nemigqa yokukhiqiza emi-2, umthamo wokukhiqiza wanyanga zonke ungaphezu kwamayunithi angama-20000 amaphaneli namabhodi okuthinta.
Yonke imikhiqizo iqinisekiswe ngezinga le-ISO. Ngohlelo lwekhwalithi yohlelo lokuzibophezela kumuntu, iminyango emi-2 ye-QC iqinisekisa ukuhlola okungu-100% ngenkathi yonke inqubo.
Kuthengiswe amayunithi angu-100000+ emhlabeni wonke minyaka yonke, ngokubambisana nozakwethu bomkhiqizo we-OEM abangu-200+, kunikeze ngokuqondile izixazululo ezikhungweni zemfundo ezingu-500+ kanye namaphrojekthi kahulumeni angu-50+.